Lọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchekwa Gburugburu Ebe obibi (EPA) kwadoro Lysol Disinfectant Spray iji lụsoo SARS-CoV-2 ọgụ, nje na-akpata ọrịa coronavirus 2019 (COVID-19).
Agencylọ Ọrụ Nchedo Gburugburu Ebe Obibi (EPA) kwadoro Lysol Disinfectant Spray iji merie SARS-CoV-2, nje na-akpata ọrịa coronavirus 2019 (COVID-19), dabere na nchọpụta nke ọmụmụ e bipụtara na American Journal of Infect Control (AJIC) ), gị n'ụlọnga mara ọkwa na a pịa ntọhapụ.
Dika okwu ikpe COVID-19 siri rigoro na mbido afo a, otutu ndi nlezi anya na ndi ogwu choro ime ihe megide nje a, mana nani ihe ndi EPA kwadoro ka ha gha ahia ahia n'ụzọ ahu. Site na nnwapụta izu a, achọpụtara Lysol Disinfectant Spray (EPA Reg No. 777-99) na Lysol Disinfectant Max Cover Mist (EPA Reg No. 777-127) iji gbochie nje ahụ na nkeji 2 iji mee ihe na-enweghị ike. , na ntuziaka ule EPA.
Nyocha a na-enyocha ndị ọgbọ AJIC tụlere ịdị irè nke ọtụtụ ngwaahịa megide SARS-CoV-2 wee kọwaa nrụpụta 99.9% maka Lysol ọkachasị.
Igwe disinfection bụ ihe bụ isi maka ndị nyocha n'oge ọrịa a, ebe ọ bụ na ebughi ụzọ mata ogologo oge SARS-CoV-2 nwere ike ibi na ebe dị iche iche. Ka ọ dị ugbu a, USlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa na United States (CDC) na-akọwa na “ọ nwere ike bụrụ na mmadụ nwere ike ibute COVID-19 site na imetụ ihu elu ma ọ bụ ihe nwere nje na ya wee metụ ọnụ ha, imi ha, ma ọ bụ ikekwe anya ha. Echeghị na nke a bụ isi ụzọ nje a si agbasa, mana anyị ka na-amụtakwu banyere etu nje a si agbasa. ”
CDC na-atụ aro iji ọgwụ disinfecting edebanye aha nke EPA na ndepụta nke N. ụlọ ọrụ.
“Nnyefe nke malitere ịrịa akụkụ okuku ume na pathogens dị ka COVID-19 nwere ike ibelata site nke ọma na zuru ngwa nke ihe EPA-edebanyere disinfectant kwa site na emeputa ihe ntuziaka, na-gụnyere na EPA si List N, na-ebupụta nakwa dị ka ezigbo onye ọcha, gụnyere aka ịdị ọcha, belata ịkpọtụrụ na ihu gị, na usoro iku ume / ụkwara ume, "William A. Rutala, PhD, MPH, CIC, na David J. Weber, MD, MPH, dere na otu isiokwu maka Ọrịa Inyeaka Today Control.
Post oge: Jun-03-2020